याे गाउँ, जहाँ राति जबरजस्ती तानेर पत्नी घाेषणा गरिन्छ — Ujyaalo Lalteen
गृहपृष्ठ » पत्रपत्रीका → याे गाउँ, जहाँ राति जबरजस्ती तानेर पत्नी घाेषणा गरिन्छ
याे गाउँ, जहाँ राति जबरजस्ती तानेर पत्नी घाेषणा गरिन्छ
April 9, 2016१४८ पटक
२६ चैत्र २०७२
गोरखा, चैत २७ । हिमालपारिको गाविस बिही–९ ड्याङकी २४ वर्षीया युवती हुन् पेमा लामा । उनी अहिले मानसिक तनावमा छिन् । वैदेशिक रोजगारीमा पाँच वर्ष लेबनान बसेर फर्केकी उनलाई युवा समूहले राति जबरजस्ती घरबाट उनलाई तानेर लगी दुईजनाको पत्नी भएको घोषणा गरिएको छ । यो त्यहाँको सामाजिक परम्परा भए पनि त्यसलाई सहजै स्वीकार्न मन तयार छैन ।
दुई महिनाअघि उनी लेबनानबाट गाउँ फर्किएकी हुन् । गाउँ फर्केको चार दिनमात्र भएको थियो । लेबनानको सुख–दुःख साट्न पनि भ्याएकी थिइनन् उनले । घर फर्केको चौथो रात चकमन्न हुँदै थियो । पेमा घरमै सुतिरहेकी थिइन् । एक्कासी आठ दस जनाको दलबल आएर उनलाई तान्न थाले । आधा रात रोइकराइ गरिन् । तर उनको चित्कार सुन्ने कसले ? बलिया केटाले उनलाई जबरजस्ती काँधमा हाले । बोकेर क्रो पुर्याए । क्रो बिही गाविसको १ नं. वडामा पर्छ ।
पेमा लेबनान जानुअघि बुबा बितेका थिए । लेबनान गएपछि उनको आमाको पनि निधन भयो । घरमा दाजु–भाउजु मात्र थिए । घरबाट आफूलाई जबरजस्ती तानेर लगेको क्षण सम्झँदै उनले भनिन्, ‘घरमै बसिरहेकी थिएँ । आठ–नौजना केटाहरु आए । दाजु भाउजुलाई मज्जाले रक्सी खुवाए । अनि म सुतेको ठाउँमा आए । तानेर लगे ।’आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।